Smart Imba: Vhura Sosi Yekushandisa Software | Linux Vakapindwa muropa
Imba otomatiki, inmotic uye yemadhorobha otomatiki, ari kuramba aripo. Iyo kumba kwakanaka Iko pano kwekugara, uye pamwe nekuvandudzwa kwetekinoroji nyowani mumagetsi, marobhoti, huchenjeri hwekunyepedzera, kufonera uye IoT, izvi zvichangotanga.
Mune ino chinyorwa ndinokuunzira akavhurwa sosi mapurojekiti ane zvakawanda zvine chekuita neakachenjera imba, uye izvo zvinobvumidza gadzira mabasa mumba mako...
1 Yakanakisa akavhurika-sosi mapuratifomu eiyo smart imba
1.2 Musha Mubatsiri
1.6 Kudzora kwekare
Yakanakisa akavhurika-sosi mapuratifomu eiyo smart imba
Pano iwe une kunyorwa pamwe nemamwe emapuratifomu epamba anonyanya kuzivikanwa uye akanakisa:
kuvhuraHAB ndeimwe yemapurojekiti akakura munzvimbo yakavhurika sosi yemusha wakangwara. Iyo projekiti iri mukusimudzira nguva dzose, uye iyo yatove iine rutsigiro rweanopfuura mazana mashanu emidziyo kubva kwaSony, LG, Pioneer, Samsung, uye zvimwe zvakawanda. Iyo yemahara software (ine yekutengesa vhezheni), uye iwe unogona kuikanda pane chero inoshanda system, usinga fanirwe nekuvimba gore.
Musha Mubatsiri ndeimwe smart imba uye nharaunda yakachengetedzwa otomatiki software. Iyi chikuva inotarisira kutonga kwemuno uye kuremekedza zvakavanzika zvako. Uye zvakare, ipuratifomu inogovera zvinhu zvakawanda neyakavhurika HAB, asi inonyatsochinja.
OpenMOTICS ine nzira yakati siyanei. Asi iri mhinduro yemvura uye inoshanda. Iyo inopa yakasarudzika module kuitira kuti iwe ugone kuishandisa neako software. Unogona kuzvitenga muchitoro chepamhepo.
Jeedom ndeimwe yakanaka smart imba otomatiki imwe nzira, kunyangwe iri zvishoma isinganzwisisike pane mhinduro senge openHAB kana vamwe vataurwa pamusoro. Dambudziko hombe ndere mutauro waro, nekuti iri vhezheni yechiFrench. Neraki, zvinyorwa zvacho zvinowanikwa mune mimwe mitauro senge Chirungu, ChiGerman kana Spanish.
iBroker ndeimwe yakavhurwa sosi purojekiti ye smart home automation yakaonekwa pakutanga kwa2017.Ikawana niche nekukurumidza zvakanyanya nekuda kwekusununguka kwayo uye nekusimba kwayo kukuru.
Kudzora kwekare yakavhurika sosi yekudzora pani yekudzora uye kugadzirisa michina yekumba zvishandiso nekukurumidza. Iyo iri lightweight uye inogona kuve yakazara mhinduro kune ese emukati nekunze zvishandiso.
Domoticz chirongwa chinodiwa kwazvo, ine nharaunda inoshanda zvakanyanya uye huru webhu gidhi yekuisa yavo software. Zvakare, inogona kuve yakanaka sarudzo kune vadzidzi vanoda kudzidza nezve idzi misoro.
FHEM ndeimwe inozivikanwa munyika yeimba otomatiki uye smart imba. Iyo yakavhurika sosi (GPL) perl server inoshandiswa kugadzirisa zvakajairika mabasa epamba, senge kutungidza mwenje, kudziyisa, nezvimwewo kuvhara kana kudzima.
Calaos chimwe chirongwa chinouya kubva kuFrance. Iyo yakavhurwa sosi uye inoitirwa kumba otomatiki. Iyo yakakwana, ine mhinduro dzewebhu, Android, iOS, Linux uye nezvimwe. Nekudaro, zvinoita sekunge haina inharaunda inoshanda sevamwe ...
Pimatic iri Hardware yakazvimiririra sisitimu ye smart home otomatiki, ine hunyanzvi hweanopfuura makumi manomwe plugins. Inomhanya paNode.js, uye inoshanduka-shanduka, nekukurumidza, uye nyore.
Wemakebridge.io iri yazvino uye isingaremi Node.js server iyo inoteedzera iyo iOS HomeKit API. Inogona kuiswa paSBC, sePi, uye nekushandira zvikumbiro zvakafanana nezve paIOS kuburikidza naSiri.
Zvinonzwisisika ndeimwe yakavhurika sosi yenzvimbo smart imba chirongwa. Iyi fomati inogona kushanda zvine mutsindo kuita mashandiro emabasa.
MyController Iyo zvakare inozivikanwa, uye inobvumidza kumhanya pane zvishandiso zvine mashoma zviwanikwa, senge Raspberry Pi 1st Gen. Nayo unogona kudzora zvishandiso mumba mako kana muhofisi, nekuchinjika kukuru. Iyo yakavakirwa paJava, kugadzirisa kwayo kuenderana nemapuratifomu akasiyana. Kune rimwe divi, tsitsi ndedzekuti nharaunda yakafa ...
PiDomeSeizvo zita rinoratidzira, iri pamba otomatiki software yakagadzirirwa chaizvo iyo Raspberry Pi.
KumbaGenie ndeimwe yakavhurwa sosi, smart home automation server. Iyo inopa chiitiko chakakura, uye ine rubatsiro runowanikwa pawebhu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Smart Imba: Vhura Sosi Yekushandisa Software